IOSX13, Apple waxay xaddideysaa adeegsiga VOIP ee gadaasha - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM In iOS 13, Apple waxay dileyso isticmaalka VOIP ee asalka
In iOS 13, Apple waxay dileyso isticmaalka VOIP ee asalka
TELES RELAY 9 August 2019
Apple waxay aad uga welwelsan tahay ilaalinta macluumaadka shaqsiyadeed ee adeegsadaheeda. Tani waxay ku lug leedahay talaabooyin cad iyo kuwa kale, waxoogaa yar oo farsamo, sida midka ina daneynaya maanta ee ku saabsan adeegsiga asalka VOIP ee asalka ah.
Iyada oo loo marayo wax ka badal yar gudaha macruufka 13, Apple waxay ka hor istaagaysaa codsiyada VoIP inay marin u helaan xog gaar ah asalka. Go'aan ayaa la qaatay si loo ilaaliyo xogta shakhsiga ah ee lagu keydiyo aaladda astaantiisa sumadda tufaaxa oo laga yaabo inay xanaaqdo magacyada waaweyn ee farsamada. Talaabadani waxay si toos ah oo cadaalad ah saameyn xoogan uguleedahay xog aruurinta barnaamijyada sida Messenger ama WhatsApp. Runtii, in la awoodo in la waco inta lagu jiro wicitaan VoIP ah oo arjiga uusan ka furneyn taleefanka, wuxuu adeegsanayaa Habka PushKit macruufka. Waa kan dambe ee ku ogaada wicitaanada khadka internetka. Isticmaalkeeda waxaa horay u afduubay habeeyayaasha si ay u ururiyaan qaar ka mid ah macluumaadka.
Apple waxay si dhab ah u xaddideysaa isticmaalka PushKit ee iOS 13
Tusaale ahaan, WhatsApp waxay u isticmaashaa PushKit qarsoodiga dhamaadka-dhamaadka-dhamaadka barnaamijka oo dhan. Snapchat iyo WeChat waxay u istcimaalaan aruurinta xogta ka sii gudubta qaab wicitaanka, sida Macluumaadka sharraxay. Kuwani waa falalka noocaas ah ee Apple ay damacday inay baabi'iso iyadoo xaddidaysa adeegsiga PushKit. Iyada oo la adeegsanayo iOS 13, shirkadda Cupertino hadda waxay ka hortageysaa adeegsiga hanaankan ujeedooyin aan ka aheyn kicinta wicitaannada codka.
Si loo ilaaliyo xogta shaqsiyeed, iyo kor loogu qaado waxqabadka
Soo saareyaashu waa inay dib u qoraan qaar ka mid ah koodhkooda si ay ugu hoggaansamaan xayiraadaha cusub ee Apple. Waxay qasab ku tahay inay sameeyaan illaa Abriil 2020, dib u dhac badan oo ku filan, gaar ahaan sida qaar horeyba ugu heleen shaqada, sida Facebook oo yiri la shaqeynta Apple si loo casriyeeyo codsiyada. Marka laga soo tago arrinta xogta shaqsiyeed, qaanuunkan cusub wuxuu sababi doonaa in la waayey howlihii hore ee asalka ahaa sidaas darteedna kor loogu qaado waxqabadka guud ee aaladaha, oo ay ku jiraan madax-bannaanida. Kaydso xogta shakhsiyadeed ee isticmaaleyaasha inta kor loo qaadayo waxqabadka, ma xuma, sax?
Apple waxay uga digaysaa dadka isticmaala iPhone khataraha ku saabsan dayactirka baytariga dhinac saddexaad ah
Iyada oo leh 'Galaxy Watch Active 2', Samsung ayaa si toos ah u beegsanaya Apple Watch 4
Heshiis wanaagsan: Apple Watch Series 3 (GPS) ilaa 249 halkii laga isticmaali lahaa 299 €
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/dans-ios-13-apple-bride-lutilisation-de-la-voip-en-tache-de-fond-324874
Ma Jirto Cirka Cirka: Ciyaaraha Salaan 'Sean Murray ma dhaho maya ka wareegida dekedaha
FIFA 20: Volta kubada cagta waxay keenaysaa qaabka wadada
La version mise à niveau et plus rapide de la meilleure extension Wi-Fi d’Amazon est tombée à 19,99 $, un niveau record – BGR
PHOTOS. Adriana Karembeu markay ahayd 48 sano: gadaal ka
Faallooyinka naxdinta leh ee boqoradda & # 039; ku saabsan qoyska boqortooyada Dutch ayaa shaaca ka qaaday
Hindiya: Wadooyin aad u wanaagsan oo ay adeegsadeen ciidamada Pakistaan ​​si ay ugu dhex galaan argagixisada J&K: Saraakiisha | Wararka Hindiya
OnePlus 7T Pro waa la shaacin karaa 10 Oktoobar ee soo socota
aan caadi ahayn24
DADKA & LIFESTYLE4,546
Daawooyinka dabiiciga ah30
TECH & TELECOM2,043
Video dheeraad ah2,046